XOG: Puntland & Imaaraadka Carabta oo ka tafatay & Dowlada dhexe oo P/land ku cadaadineysa… | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Maamulka Puntland ayaa maalintii shalay ahayd magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ku xanibay diyaarad Militari oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabt,taasi oo qaadi lahayd Saraakiil u dhashay wadankaasi oo tababarayaal ciidan ahaa.
Dadka Odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in talaabadii shalay uu qaaday Maamulka Puntland ay ahayd mid sii hurin karta Xiisada siyaasadeed ee u dhaxeysa Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya,islamarkaana baal cusub u fureysay xiriirka Puntland iyo Imaaraadka.
Shirkadda DP World oo dalka laga mamnuucay ayaa hadda gacanta ku heysa Dekadda iyo Garoonka magaalada Boosaaso,waxayna dhaqaalo ka helaan halkaasi.
Xanibaadan oo qaadatay saacado, abuurtayna xiisad ayaa timid kadib markii Saraakiil iyo tababarayaal u dhashay wadanka Imaaraadka oo ku sugnaa xerada ciidamada Badda ee maamulka Puntland ay gabi ahaanba maalintii shaley isaga baxeen halkaasi.
Saraakiisha Imaaraatka ayaa Boosaaso u joogay si ay tababaro iyo taakuleyn usiiyaann Ciidanka Badda ee maamulka Puntland sida ay sheegeen ilo wareedyo amni oo ka tirsan maamulkaasi.
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay sii xumaanayey xiriirka u dhaxeya kooxda ridada iyo dowlada dabadhilifka ee Imaaraadka Carabta.